update – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Keybot 36 Results 11 Domains
Ungakukhetha esikunikeza khona, okubandakanya ukufinyelela nokubuyekeza imininingwane.
Ngiyiphequlula kanjani iwebhu ngamathebhu?
Siza ukuvikela amagciwane.Sebenzisa amasofthiwe okuvikela amagciwane futhi uwabuyekeze njalo. Qinisekisa ukuthi izingane zakho zigwema ukulanda kusuka kumawebhusayithi okwaba amafayela futhi zingamukeli amafayela noma zivule okunamathiselwe kwama-imeyili kusuka kubantu abangabazi.
Uma uhlelo ludinga noma lubandakanya amasofutiwe alandekayo, le sofutiwe ingabuyekeza ngokwayo edivayisini yakho uma sekunenhlobo entsha. Ezinye izinhlelo zingakuvumela ukuthi uhlele izisetho zakho zokubuyekeza okuzenzekelayo.